Date My Pet » How Zvokupfimbana Mumwe Kubva Dog Park
Last updated: Jan. 11 2021 | 2 Maminitsi verenga
Fungidzira izvi, uri achikanda Frisbee neshamwari yako Negima panguva yomunharaunda imbwa paki uye unoona yaunayo mweya naye kure. Unoita sei zvino? Kubva pakutanga okutanga nokunama ngaakuitirei kuti zuva, hatina vakanyora mazano sei nomumwe munhu kubva imbwa Park.
muromo #1: Dzidzisa Dog Your INOBAYA MWOYO minimini
Nepo zviri njodzi kutaura kuti munhu wose ari imbwa mumapaki anoda imbwa, pane chinhu chinofanira wakange ane imbwa kuti anoziva chinhu chinoshamisa vakakodzera minimini. Muchishandisa murayiro asazivikanwa, unogona kudzidzisa imbwa yako nzira kuti kwete chete kunopa unhu hwako asi ndichazvikudza wemashiripiti vamwe.
muromo #2: Regai Dog Your Kutamba pamwe Other Dogs
Achiratidza kuti imbwa yenyu kwete chete anofarira dzimwe imbwa asi anofarira kutamba navo zvinoita here kuti zvikuru vanotaurika. Plus kana ukaita rova ​​rugure, Imbwa dzenyu dzichashanduka vanokwanisa kurarama pasi chete remba uye hapana anoda kuunza imbwa asingatendi kuwirirana nevamwe. Chinokosha kuwana imbwa yenyu kuva shamwari kutanga.
muromo #3: Kutanga Okurerutsa Conversation
Kana chinhu zuva rakanaka kunze kana chokwadi kuti zvose dzembwa dzako vari kutamba mumwe, nditange nekungotaurawo. Zviri pahurukuro iyi, uchawana kudzidza zvakawanda pamusoro munhu uyu. Tanga kubvisa anononoka mundotarira inotungamirira.
muromo #4: Exchange Phone Numbers kuti Doggy Date
Kamwe maita akataura kakati akasiyana, kumbira kana kazhinji kuuya imbwa Park. Zvadaro zvinoratidza kuti iwe kuchinjana nhamba kutungamirira munhu doggy zuva. Izvi Musi kwokutanga harizoiti sezvaraiva zvaityisa sezvazvakanyorwa pfungwa kumativi dzembwa dzako.
muromo #5: Vagamuchire Date Kukokwa – Sans Dogs
Wangoziva kuti vanongofarira, kuvabvunza panze pamusoro chisvusvuro musi. Kuita ari kupfuura revanoshamwaridzana marongero sans imbwa kuchaita kuti kunyange zvakadzama kukurukurirana uye tinotarisira kuti ichaita kuti zvimwe.
With Mazano aya, zvino munoziva chaizvoizvo zvokuita nguva inotevera waunoona kuti söpöläinen panguva imbwa Park.
Inoyerera Dogs: Kuita Pup Your Kurusununguko Soulmate Your
5 Mibvunzo Zvaunofanira Kumbira On The First Date